अन्तमा | 24onlinenews | Digital News Paper | डिजिटल पत्रिका
७ मंसिर २०७७ २२:२७
आफूले भोगेको गरेको देखेको मात्रै सही हो भन्न पछि पर्दैन मान्छे तर त्यो नै त होइन नि । अफसोच ! बुझ्न खाज्दैन, बुझे पनि थाहा नपाए जस्तो गर्छ उसको अहंले । संसारलाई कत्तिसानो बनाउँछ, सर्वविज्ञ भन्ठानेर आफूलाई, मूर्ख छ आफू तर ऊ अरूलाई मूर्ख ठान्छ । जात जनाउनै पर्ने जस्तो, मानिस न हो । फेरि यत्तिसारो गरी भन्न पनि हुन्न संसारलाई बुझेर बुझिनसक्ने ब्याख्याताहरू पनि मानिस नै हुन् । भुसुनोसरीको मानिस भब्य ठान्छ आफूलाई । उसलाई थाहा छैन कि उसले नदेखेको पनि संसार छ ।
राजेश यस्तै एक व्यक्ति हुन् । उनी आफूलाई विद्धान, गुणी, चलाख आधुनिक, सफासुघ्घरी, धनी, विश्लेषक सम्झन्छन् । अन्य के के अलंकार हुन्छन् उनी ती सबैलाई पगरी बनाई गुथ्न चाहन्छन् । पहिले संयुक्त परिवारमा बसे पनि समय, बाध्यता, चाहना अनुसार सानै परिवारमा बस्छन् उनी स्वतन्त्र भएर । प्राइभेट जागीर खाएकोले इच्छा अनुसार आवश्यकता बनाएका उनी राम्रो भन्दा पनि ज्यादै राम्रो कमाइ गर्छन् । व्यक्तिगत इच्छा कहिल्यै मार्नु परेन उनले, दुबै जना जागीरे भएकोले पनि यसमा प्लस प्वाइन्ट भएको हो । दुई सन्तान पढाइ र सुविधा दुबै राम्रै भोगेर हाल विदेशमा सेटल भइसकेका छन् । उनलाई केही कसैको रोकटोक–थुनछेक छैन, स्वतन्त्र छन् त्यसैले त इच्छा अनुसार चलिरहेका छन् ।
देख्दा खाइलाग्दा, चिटिक्क परेका, हँसिला, चस्मा ढल्काएका सबैमख्ख र लठ्ठ पर्ने नै छन् । उनी पनि यही चाहन्छन् याने कि म पनि यी बिपरित लिंगीप्रति सजिलै लठ्ठ पर्न पाऊँ । शुरु शुरुमा नैतिक शिक्षा पढेका र पढाउने हिसाबमा बोल्ने अनि सो बिर्सिएर सामाजिक बन्ने त्यस पछि आफूले त्यस ब्यक्तिको आँतभेउ, मनपेट पाएको अनुभवमा बिस्तारै आफ्नो चङ्गुलमा पार्ने काममा पर्फेक्ट छन् । तर यो कुरा घर परिवारमा थाहा नहोस् भन्ने चाहन्छन् उनी । थाहा पाएर पनि आफ्नै चाहना अनुरुप चलाइरहेका छन् उनी । आखिर पितृसतात्मक देश न हो यो ।
एक ठाउँमा मात्रै होइन उनको काम, धेरैवटा अफिसमा भ्याउँछन् । समय मिलाएर पुगेको ब्याख्या गर्छन् । आफ्नै आधुनिक साधन भएकोले भन्न, सुनाउन, पत्याउन सजिलै हुन्छ । घर आइपुग्ने कुनै समय हुन्न उनको नकि निस्कदाको । आखिर इच्छा अनुसार चलेका न हुन् । महिला जात देखेपछि उनलाई समयको मतलब नै हुन्न । त्यहाँ दया माया देखाउन पछि पर्दैनन्, अवस्था अनुसार सबै बुझे जस्तो गरी कुरा गर्छन् । सकेसम्म पेटारो खुलाएरै छाड्छन् भित्रि कुराको । उसको कमजोरी के छ पत्ता लगाउँछन् । बिस्तारै आफ्नो मान्छेको भूमिका निभाउन थाल्छन् । नारी न हो, उसलाई कुरा लुकाउन आउँदैन सबै ओकल्छिन् अनि त के चाहियो ? उसलाई बाध्यतामा पारेर विबशतामा पु¥याएर आफू नजिकिएर उसलाई नजिक बनाएरै छाड्ने बानी छ राजेशको । घरमा अफिस गएको कुरा जानकारी छदैछ, उनका अफिस कति थरिका छन् अरु कसले बुझ्ने ?
सबै मान्छेसँग राम्रो छ उनको । ससुरालीतिर पनि पहिला त सबैको हाइहाइ थिए । मान्छे हँसिला छन् नि त । क्रमशः उनले आफ्नो बानी सबैतिर प्रयोग गर्न थाले । बानीको यति दास भए कि आफ्ना सन्तानका उमेरका कोही नारी जाति देखेपछि छोड्नै नसक्ने चाहे नातेदार नै किन नहोस् । बिस्तारै नजिक भएर कुरा गर्दै गर्दै चुचे ढुङ्गो उहि टुङ्गो भने झैं कुरा त्यही पु-याएर भन्थे एक पटकले के फरक पर्छ त ? नेचुरल निड त हो नि, हैन र ? अब ससुरालीका मान्छेलाई सही नसक्नु भयो । आफ्ना छोरी बुहारी जोगाउनका लागि कुरा बिस्तारै बाहिरियो अनि उनको सम्बन्ध पनि चिसियो । मानौं कट अफ नै भयो । बाहिर पनि उनको बिषयमा कुरा सुनियो तर पितृसतात्मक देश सुन्ने र सुनाउनेसँग सम्बन्ध तोडियो, उनी चोखा । लागेको बानी को छोड्छ ? आर्काको बानी को लिन्छ ? भनेझैं उनी यसमा, यो कलामा पोख्त छन् । उनलाई कसैको डर पनि छैन, कसैसँग लाज पनि छैन । आरामकासाथ आफ्नो बानीको बिकासलाई चरम चुलीमा पु¥याएर आनन्द र आरामदायी जीवन बाचिरहेका छन् ।
सोचिरहेका छन् म कति चलाख छु । आफ्नो चाहना पुरा गरेको कसैलाई थाहा छैन । नयाँ मान्छेसँग कुरा गर्नपरे आधुनिक समय सान्दर्भिक, राजनैतिक, औद्योगिक आदि सम्बन्धि गर्छन् । कतै कतै साहित्यिक गफ गर्न पनि पछि पर्दैनन् । आफूलाई सब्य, भब्य, सुसंस्कृत देखाउँछन् र सोच्छन् । तर के यही हो त सत्य, तथ्य र सही ? के यही हो त अरूको पनि संंसार ?
अहिले सख्त बिरामी पर्दा एकान्तमा पर श्रीमतीको छायाको साथमा लडिरहेका छन् ।